Abadwebi Beprojekthi Yokudweba Iphrojekthi kanye nabahlinzeki - China Iphrojekthi Yokudweba Iphrojekthi Yephrojekthi
Isingeniso Villa: Kuyisandiso esikahle sokuhlala komndeni kanye negama elifanayo lokunethezeka, okuphezulu, ubumfihlo kanye nengcebo. Kuyindawo yokuhlala engadini eyakhiwe emadolobheni noma ezindaweni ezinhle zokululama. Yindawo yokujabulela impilo. Ngokuvamile kuqondakala ukuthi, ngaphezu komsebenzi oyisisekelo “wokuhlala” njengendawo yokuhlala, indawo yokuhlala esezingeni eliphakeme, ikakhulukazi ikhombisa izinga lempilo nezimpawu zokuthokozela, nendawo yokuhlala engadini ezimele e-meani yanamuhla .. .
Isingeniso Amandla obuchwepheshe enkampani: Le nkampani inabaqambi abayi-7, abakhi bezakhiwo ezi-3, abaklami bezakhiwo aba-2, nomklami wamanzi nogesi o-1, abathathu babo asebenze esikhungweni sokuklama iminyaka engaphezu kwengu-3. Emkhakheni ohambisanayo wobungcweti, ubuncane bokuphila kwabaklami yiminyaka emihlanu, futhi impilo yokusebenza ephezulu ifinyelele eminyakeni eyi-13. Idizayini yemidwebo yensimbi ifaka phakathi: (izakhiwo zehhovisi, amahhotela, izindlu zezivakashi) namanye amafreyimu ...